Sideed ii caawin kartaan?
Waxaan kuu sharxi doonaa arimaha waxaana macluumaad kugu siin doonaa tooska bogga internetka.
Halkan wax xumaan ah kuma gaarayaan carruurta iyo dhallinyaradaba.
Waxaan ballan ku marnay in aynu kusiino taageero.
Waana midaasi sababta aynu kuugu sharxayno waxyaabo badan.
Si aad u oggaatid waxa wanaagsan iyo waxa aanan wanaagsanayn.
Uma caawino si toos ah carruurta iyo dhallinyarada.
Nagulama soo hadli kartid teleefoon.
Laakiin waxaa jooga dalka Jarmalka dad kale kuwaas oo caawiya carruurta iyo dhallinyarada.
Xitaa marka ay la kulmaan rabsho.
Xitaa marka ay la kulmaan xad gudub galmo ah.
Waan kuu sheegi karnaa halka aad caawimaad ka heli kartid.
Waa in aad ammaan ku dareentid halkan.
Posted on July 26, 2016 Author editorialteamCategories Help - Hilfe
Qofkee i caawin kara? Waxaa la iigu xad gudbey galmo ahaan.
Dalka Jarmalka waxaa jooga dad badan oo caawiya dhallinyarada.
Waxay ka shaqeeyaan xarumaha tallo bixinta.
Waxay ku caawin karaan xaalada ay rabsho dhacdo.
Waxay ku caawin karaan xaalada uu xad gudub galmo dhaco.
Tallo bixintu waa mid lacag la’aan ah.
Waxay kugu caawin doonaan in aad go’aansatid nooca caawimaada aad u baahantahay.
Sidoo kale waxaa jira xarumo tallo bixin loogu talogalay dadka qaxootida dhallinyarada ah.
Nasiib daro bogga wuxuu ku qoranyahay oo kaliya luuqada Jarmalka.
Inta badan waxaa khasab kugu ah in aad samaysatid ballan.
Weydii qof haddii ay ku caawin karaan. Inbadan oo ayaga kamid ahi waxay haystaan turjubaano.
Haddii aysan qabin turjubaano, markaasi waxaad hore u wadan kartaa qof adiga kuu turjuma.